उपकार लघुवित्तको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया शुरु, रेटिङ सम्पन्न
काठमाडौं । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको हो । इक्रा नेपालले कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओलाई आईआर बीबी रेटिङ प्रदान गरेको छ । यस्तो रेटिङले कम्पनीले समयमा दायित्त पुरा गर्न चुक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको देखाँउछ ।
कम्पनीले १ लाख २६ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ करोड २० लाख रहेको छ ।आईपीओ निष्कासन पछि कम्पनीको पूँजी रू. ५ करोड ४६ लाख पुग्नेछ । उक्त आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृती पाएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन हुनेछ । कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ५ करोड ४ लाख ५२ हजार नाफा कमाएको छ ।गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू.१ करोड ३६ लाख नोक्सानीमा थियो ।
चालू आवकोतेस्रो त्रैमासमा रू. ४२ करोड ४७ लाख २२ हजार खराब कर्जा उठाउन उठाएको र खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि पनि भएकाले कम्पनीले नाफामा वृद्धि गरेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले जगेडामा रू. ११ करोड ९२ लाख १३ हजार सञ्चित गरेको छ ।